Mgbe ụfọdụ ị gaara mmasị a song on Spotify unu na-achọkwa na-azọpụta ya na ngwaọrụ gị dị ka ihe mp3 faịlụ na ọ bụghị naanị na Spotify. Ma, ị na-enweghị ike na-eme ya? Enweghị nchekasị n'ihi na ugbu a, i nwere ike ime ihe nile na ị chọrọ na rippers. Ripping ga-ekwe ka ị na-ege ntị nkwanye free, download ngwaọrụ gị, detuo na ịkekọrịta tracks na ndị enyi gị. Ị nwere ike idezi na egwu na will.Spotify Rippers:
• N'ihi na Mac
Gụgharia music edekọ ihe; Max music; iSkysoft audio edekọ
• N'ihi na windows
Gụgharia music edekọ ihe; Max music; iSkysoft audio edekọ ihe; Audacity
• N'ihi na Linux (Ubuntu)
Audacity; Audio edekọ
A bụ ndepụta nke ụfọdụ rippers na ike ịbịa kemfe n'ihi nzube a.
Part1. Gụgharia music edekọ
Part 2. Max Music
Part 4. iSkysoft Audio teepu
Part 5. Audio edekọ
1. gụgharia music edekọ
Windows njikọ: download.handysoft.org/ws_streamingrecorder_win_av.exe
Mac njikọ: download.handysoft.org/ws_allmymusic_mac_av.dmg
Nke a Wondershare ngwaahịa dị mfe iji na e weere n'etiti ndị kasị mma. Ọ ga-ekwe ka ị na idekọ audio ọ bụla na online isi iyi (redio ụgbọ, YouTube, Spotify na ndị ọzọ na online gụgharia isi mmalite). Iji Wondershare music edekọ bụ mara mma dị mfe.
Wụnye software na PC gị na
Ka ịmalite ndekọ pịa ndekọ bọtịnụ na interface na elu akaekpe
-egwu music na isi iyi na-edekọ ga-akpaghị aka mgbe music amalite na isi iyi. Mara - bụrụ na ị na-Ndekọ ọtụtụ tracks na n'ihu, software na-akpaghị aka na-emepụta iche iche faịlụ tinyere nkọwa ewepụtara isi iyi.
ịchekwaa ndekọ na-enwe
• mmekọrịta nkọwa nile na-akpaghị aka
• Obere software otú bụghị ọtụtụ ohere mkpa
• Free version nwere mmachi atụmatụ
• Ike-arụ ọrụ na niile isi mmalite.
2. Max Music
Windows njikọ: http://applian.com/replay-music/?utm_source=Shareasale&utm_medium=affiliate
Mac njikọ: http://applian.com/mac/ (bụghị free)
Ọ bụ a amamiihe e kere eke bara uru ka ndekọ music maka ojiji nkeonwe. Ihe niile ị chọrọ ime na-wụnye, họrọ netwọk na iti ndekọ.
wụnye ya na gị PC
gaa na ntọala ma họrọ ọnọdụ na ị chọrọ ịzọpụta rip, format gị mkpa.
pịa nduzi, họrọ na-eweta ọrụ (music n'elu ikpo okwu)
gaa na music saịtị, egwu music. Max music ga na-akpaghị aka na-amalite na ndekọ na ịkpado nkọwa n'out oge.
• Nga kenyere njikọ nke ma ama na-kasị eji music netwọk
• Auto geo nke nkọwa
• Ya bụghị free maka Mac.
• Limited atụmatụ na free version Around 15 $ maka zuru version
Download njikọ: http://sourceforge.net/projects/audacity/files/latest/download
Ọ bụ isi na ngwa ma ripping ọnụ ọgụgụ buru ibu nke tracks nwere ike ghara ịbụ ọrụ enyi na enyi. Ọ na-achọ mgbalị dọwara na egwu. Ọrụ ga-mkpa nyegharịa tracks na nkọwa ndị ọzọ aka. Ma ị ga-esi edit tracks na ndị ọzọ na mgbanwe iji nke a software.
Olee otú iji a software?
amalite audacity na mgbe ahụ oghe 'edit' menu ma họrọ 'mmasị'. Mee ọwa dị ka stereo.
pịa ndekọ bọtịnụ ma-egwu music na Spotify ngwa. IHE: audacity dere niile music / ada mmepụta si ọkà okwu, si otú ọ bụla ọzọ mkpọtụ ma ọ bụ ụda ụdị usoro a ga-dere. Ya mere, iji zere nsogbu atụgharị ha ka ha dara ogbi.
pịa nkwụsị na audio map ga-emeghe. Tinye nrịbama iji họrọ track ngalaba gị mkpa ma-azọpụta ya. Ị dị njikere na-aga.
• Họrọ gị ngalaba na egwu.
• Chọrọ ezuru mgbalị.
• Enweghị ọrụ enyi na enyi atụmatụ
4. iSkysoft Audio teepu
ụfọdụ bara uru promo Koodu na Kupọns nke nwere ike na-arụ ọrụ na netwọk gị
Download njikọ: http://download.iskysoft.com/audio-recorder_full1892.exe"
Ọ bụ a mara mma nnukwu ngwa bara uru n'ihi na music hụrụ (karịsịa maka Mac, ike ga-eji n'ihi na windo na-). Nke a ga-adịghị tụkwasịrị gị na ojiji.
wụnye ngwa na gị usoro.
see ndekọ button na-aga ka isi iyi faịlụ (music gụgharia saịtị) na-amalite track.
iSkysoft ga na-akpaghị aka na-amalite na ndekọ dị ka music mmalite.
Cheta na: n'ihi na syncing na egwu nkọwa ị mkpa aha ahụ na-azụ zuru ezu version.
• bara uru dọwara tracks
• mkpa zuru version, zuo ọrụ iji niile atụmatụ
• nwere ike adịghị akwado niile gụgharia ụgbọ
5. Audio edekọ
Download njikọ: https://launchpad.net/audio-recorder
Nke a audio edekọ bụ bara uru maka GNOME na Ubuntu (Linux) ọrụ. Ọ nwere ike na-eji maka version 10.10 n'ihu. Ya nnọọ kemfe na mfe iji. Ọ nwere ike na-akpali ndekọ ọrụ na mmekọrịta na Linux media Player nakwa dị ka Skype.
wụnye ngwa na ẹkedori ya site 'Ngwa Lens'
Nzọụkwụ 2: amalite ndekọ, họrọ mmepụta dị ka mp3 na isi dị ka stereo.
iStep 3:-egwu music na gụgharia ngwa na-enwe.
• Hazie ka kwa ojiji
• Limited akwado ọdịnaya na formats